Mount Santa Lucia, Sta Lucía - Santiago
Amerika Atsimo Shily Santiago
Adiresy: Sta Lucía, Santiago, Región Metropolitana, Chile;
Haavo: 629 m.
Ny tanàna tsirairay dia manomboka amin'ny vato tokana, noho izany dia tsy misy angano ny renivohitr'i Chile , Santiago . Niala tao amin'ny Tendrombohitra Santa Lucia ny conquistador Pedro de Valdivia tamin'ny 1541, ary nandidy ny hanorenana tanàna vaovao. Nandritra ny taona maro, nitombo i Santiago, misy faritra vaovao, saingy nijanona ny lay, izay nankatoavin'ilay mpanorina ny tanàna.
Ny Tendrombohitra Santa Lucia dia eo afovoan'ny tanàna, noho izany dia manakatona ara-bakiteny manodidina azy io. Nandritra ny taona maro dia nisy tendrombohitra samihafa nanokatra ny tendrombohitra. Rehefa avy niaina horohoron-tany nandravarava, ny fanafihan'ny Indiana, dia navaozina hatrany hatrany ny fomba amam-panaon'ny Shiliana tsara indrindra.
Ny tena mahasarika an'i Santiago
Amin'izao fotoana izao, Mount Santa Lucia, Chile - iray amin'ireo toerana manan-danja indrindra ho an'ny mpizaha tany, dia ampahany manan-danja amin'ny tantaran'i Santiago sy Chile. Inona no hita ankehitriny ho an'ireo mpandeha, indray mandeha volkano, izay efa 15 tapitrisa taona ny taonany. Raha te hahita ny renivohitra amin'ny hatsarany feno, mila mianika tendrombohitra ianao, dia afaka mahita ny hatsaran'ireo trano avo be, arabe midadasika sy malalaka ary malalaka.
Misy fomba roa ahatongavana any an-tampony - miaraka amin'ny fanampiana amin'ny tongotra na ny tongotra, ny tendrombohitra dia 629 m avo, mitombo 69 m eo ho eo ny manodidina. Mihevitra ny Shiliana fa ny fiantsorohana ny fihaonambe dia manaraka ny dian'izy ireo, raha tsy izany dia mihitsoka ny voditongotr'ilay famolavolana manontolo. Ho an'ity fitakiana lava ity dia mihoatra ny herinaratra noho ny antony marobe, dia ilaina ny mampiasa fomba hafa - lohasaha efa tranainy.
Ankoatra ny lanjany ara-tantara, ny Tendrombohitra Santa Lucia dia mahaliana ireo mpizahatany miara-mipetraka amin'ny havoana iray, ny kianja dia 65.3 metatra toradroa. m. Ireo izay tia sary, tahaka ny loharano, izay ho tsara fototra. Tsy dia mahaliana loatra ny fasadan'ny valan-javaboary, ary koa ny tohatra entana.
Aorian'ny diabe lavitr'ezaka ao amin'ny valan-javaboary sy ny fitsidihana ny tendrombohitra dia afaka mamelombelona anao amin'ny sakafo tsotsin-tsakafo tsara indrindra any amin'ireo trano fisotroana akaiky indrindra ianao, mitsidika ny tsena Central izay misy amidy amidy amidy, mividy fivarotana ary fivarotana hividy fanomezana sy fahatsiarovana.
Hitady mora kokoa ny tendrombohitr'i Santa Lucia, iray monja no mandeha eny afovoan-tanàna mba hahita izany. Raha tsy mividy fitsidihana an-dalamby an'i Santiago ianao , izay tsy maintsy ahitana fitsidihana any an-tendrombohitra, dia azonao atao amin'ny bus na bus amin'ny alàlan'ny metro.
Center of Patio Bellavista
Basilica an'ny Virjina Mercedes
Trano Pablo Neruda - La Chascona
Museum of Fine Arts (Shily)
Ny Museum of St. Francis (Santiago)
Tranom-bakoka miara-miasa amin'i Mirador
Ahoana ny handrahoina ny poti-kazo?
Ronono ho an'ny ankizy
Inona no raketin'ny magnesium?
Soso-tsakafo - recipe
Ahoana no hanesorana marika marika eo amin'ny tratra?
Fomba hisafidianana matory amin'ny fandriana roa - inona no safidy tsara kokoa ho an'ny torimaso tsara?
30 Fangataham-bolo mahatalanjona ho an'ny Halloween
Herniated hernia - fitsaboana
Ahoana ny fampakarana brôtaly?
Sakafo mangatsiaka miaraka amin'ny menaka
Mitondra amin'ny tanany
Karakarao ny hoditra maina
Baolina Oak - famokarana medikaly
Recipe ho an'ny lasopy holatra mena
Hazo ao anaty lafaoro - hevitra miavaka ho an'ny sakafo ao an-trano
Azo atao ve ny mamono ireo reny mampinono amin'ny masom-boly?
Fitantanam-bola ara-pahasalamana Guajo
Kiraro mamelana, nefa tsy mamoa - inona no tokony ataoko?
Gelatin ny volom-bolo - 4 tsara indrindra ary mahatalanjona ny vokatra
Toerana ho an'ny ankizy
T-shirts ho an'ny fahavaratra ho an'ny zazavavy